Wednesday November 21, 2018 - 11:49:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerarka oo uu fuliyay wiil dhalinyaro ah ayaa ka dhacay meel ku dhow Isbitalka Mercy oo ku yaala koofurta magaalada Chicago waxaana ku dhintay ilaa 4 qof oo uu kujiro sarkaal katirsan ciidanka Police-ka wadankaasi.
Afhayeenka ciidanka Police-ka Magaalada Chicago ninka lagu magacaabo Antonio Goglilme ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in weerarkan uu ka dhacay daanta koofureed ee magaalada.
Ciidanka Police-kana ay toogteen ninkii weerarka fuliyey baaritaanadooda horudhac ahna ay muujinayaan in dilka dadkan uu ka dhashay Khilaaf Shakhsi ah oo soo kala dhex galay ninka dilka geystay iyo haweeney dhakhtarad ahayd oo Isbitalka ka shaqeyneysay taas oo Ninkan ay horey ukala tageen.
4ta qof ee goobta ku dhintay ayaa isugu jira 2 Dumar ah oo da’dooda ay u dhexeyso 20 illa 30 sano, Sarkaalka Police-ka ah iyo Ninkii weerarka fuliyey, sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha magaalada Chicago, oo goor dambe ka hadlay weerarka halkaasi ka dhacay.
Taliska Police-ka Mareykanka ee magaalada Chicago illaa hada ma uusan shaacin magaca qofkii werarka fuliyey , war kasoo baxay Xafiiska Antonio Goglilmi ayaana lagu yiri "weerarkan waxaa ku dhintay 3 qof oo Biri mageyda ah iyo Fulaygii weerarka geystay kaas oo aan mudneyn in magaciisa la sheego", inkastoo warbaahinta gudaha ee wadankaas ay ka dhawaajisay in ninka dilka geystay lagu magacaabo Juan Lopez oo ahaa 32 sano jir, u dhashay dalka mareykanka.
Tiro dad ah oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay Isbitalka caafimadka Mercy oo agtiisa iyo gudahiisa uu weerarku ka dhacay, waxaana lasoo sheegaya in qaarkood ay xaaladoodu tahay mid culus.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah dilalka sida joogtada ah kaga dhacayay gudaha dalka mareykanka waayadan danbe, kuwaas oo la sheegay in sanadkiiba ay galaaftay, Nolosha Kumanaan Qof oo American ah.